काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले न्यूज २४ टेलिभिजनले आफ्नो मानमर्दन र आफू कार्यरत कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रशारित सामाग्रीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले न्यूज २४ टेलिभिजनले आफ्नो मानमर्दन र आफू कार्यरत कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रशारित सामाग्रीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । साथै उनले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति निलिई वार्ता रेकर्ड गर्नु, आफुखुसी सम्पादन गर्नु र गलत मनसायले युक्त भई प्रसार प्रचार गर्नु दण्डनिय अपराध भएको पनि बताएका छन् ।
खनालले उक्त टेलिभिजनका पत्रकारले साँझ भेट्ने समय माग गरेकामा उक्त समय आफू व्यस्त हुने जानकारी दिदादिदै पनि पत्रकारले चित्त नबुझाइ पटक पटक एउटै कुरा गरेपछि आफूले ठेट नेपालीमा भट्टीमा हुन्छु भने जवाफ दिएको तथा वार्ताको क्रममा भएका अन्य कुरा प्रचार नगरी के कसरी सम्पादन गर्दा मेरो र म कार्यरत कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन सकिन्छ त्यही मात्र प्रशारण गरी मान मर्दन गरीएको प्रष्ट देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन । हेर्नुहोस्–प्रवत्ता खनालको प्रष्टिकरणको पूर्णपाठ :
न्यूज२४ र भट्टीको प्रशङ्ग
गत असार २८ गते आईतवारका दिन विहान ११ः२४ बजे, ११ः३० बजे र ११ः३२ बजे तीन पटक ९८४८९१८३२१ नम्बरको मोबाईल नम्बरबाट मेरी निजी टेलिफोनमा कल प्राप्त भएकोमा मैले पहिला कल आफु व्यस्त भएकोले काटिदिंए । पुनस् सोही नम्बरबाट फोन आए पछि केवल १३ सेकेण्ड वार्ता भयो र सम्बादको अन्त्य भयो । त्यस पश्चात पुनस् ११स्३२ मा सम्पर्क गरी कुराकानी शुरु हुँदा २ मिनेट ५६ सेकेन्ड वार्ता भयो । वार्ताका क्रममा निजले सोही दिन साँझका लागि समय माग गरेकोमा आफु सो समयमा उपलब्ध हुन नसक्ने र सो समय साथीहरु सँग अन्यत्र व्यस्त रहने कुरा वताएकोमा निजले सो कुरामा चित्त नबुझाई पटक पटक एउटै कुरा गरे पछि कार्यालय समय पछिको समय समाजिक नैतिक र व्यवहारिक मुल्य र मान्यतालाई असर नपर्ने गरी आफ्नो व्यक्तिगत कार्य गर्न आफु पूर्ण स्वतन्त्र रहेको हुँदा निजलाई कुनै चिप्लो चिल्लो वा बनाबटी कुरा नगरी सिधा सिधा ठेट नेपालीमा भट्टीमा हुन्छु भनेको हो ।
“भट्टी” शब्द अश्लिल होईन र भट्टीमा जान्छु भन्नु रक्सी खान जान्छु भन्ने एकल अर्थ लगाउनु पनि उचित हुन्न । किन कि भट्टीमा मदिरा प्रेमी साथीका साथ म मदिरा नपिउने मान्छे पनि सहभागी हुन गएको हुँ । सामान्यतयास् भट्टीमा गएर अमृत पिईदैन तथापी भट्टी अन्य व्यक्ति प्रवेश वर्जित स्थान होईन ।
वार्ताको क्रममा भएका अन्य कुरा प्रचार नगरी के कसरी सम्पादन गर्दा मेरो र म कार्यरत कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउन सकिन्छ त्यही मात्र प्रशारण गरी मान मर्दन गरीएको प्रष्ट नै देखिन्छ । सत्य तथ्य पश्कन भन्दा पनी एचयउबनबलमब सृजना गर्न निज उद्दत भएको कुरा छर्लङ्ग छ ।
निज पत्रकारलाई मेरो जवाफमा चित्त नबुझे सिधै मेरो कार्यालयमा आउन सक्ने नै थिए । ज्ञात होस् कि वार्ताको क्रममा निजले मलाई प्रत्क्ष्य भेट्न आउने छु भनी वताएका थिए । उनले त्यसो नगरी सूचनाको सट्टा “मसला” खोज्न तिर लागे । निज टेलिभिजन स्टेशनबाट माननीय मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयको प्रवक्तालाई भेट गर्ने समयमा यस विभागमा आउन सक्ने थिए । मलाई सहजै भेट्न सक्ने थिए । त्यता तिर नलागि निज सूचनाको सट्टा मसला र सचेतनाको सट्टा उत्तेजना फैलाउन तिर लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।
टेलिभिजनको उक्त समाचारलाई आधार मानी विभिन्न व्यक्तिले Facebook तथा Twitter मा यो समाचार share गरेको समेत पाएँ ।जनताले समाचार हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने हो ।समाचार जसरी आएको छ त्यसै अनुरुपका प्रतिक्रियाहरु पढ्न पाईएको छ । धेरै साथीले निजी जिवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु भएको छ भने केही मलाई नचिन्ने साथीहरुले हरिलठ्ठक, भ्रष्ट, असभ्य जस्ता विशेषणले सुशोभित गराउनु भएको छ । यो सब उहाँहरुको समाचार माध्यम प्रतिको विश्वाशको कारण सृजित भएको हो । अविश्वास भएको भए पक्कै यति धेरै प्रतिक्रियाहरु आउने थिएन ।
जनतामा सरकारकी कर्मचारी र राजनैतिक दलका नेता प्रति नकारात्मक कुरा मात्र सम्प्रेषण गरी व्यापक वितृष्णा र नैराश्यता मात्र भर्ने काम यी जस्ता पत्रकारका कारणबाट भई रहेको छ । जनतालाई सुसूचित गर्ने सहि सूचना सङ्कलन गरी जिम्मेवार नागरिक बन्न सहायक बन्ने खालका सामग्री यी पत्रकारले प्रसार गरेका छन जस्तो लाग्दैन । आशाका किरण होईन नैराश्यताको बादल मात्र देखाई दिन्छन् । म सँग भएको नितान्त वैयक्तिक कुरालाई समाचार बनाउने बाहनामा मेरो पदीय मर्यादामा ठेस पु¥याउने, समाजिक जिवनमा ग्लानी महशुस हुने किसिमले जसरी सम्पादित वार्ता प्रस्तुतिकरण गरीयो त्यसबाट म दुखित भएको छु ।
सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति निलिई वार्ता रेकर्ड गर्नु, आफुखुसी सम्पादन गर्नु र गलत मनसायले युक्त भई प्रसार प्रचार गर्नु निश्चय नै दण्डनिय अपराध हो ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीको २४ सै घण्टा नेपाल सरकारको अधिन रहन्छ । तथापी कार्यालय समय अगाडी र पछाडी प्रचलित नेपाल कानून, सामाजिक मान्यता र व्यवाहारिक मुल्यहरुले अस्विकार नगरेका कार्यमा संलग्न हुन म पूर्णत स्वतन्त्र छु । मैले कानून र समाजले जान बर्जित नगरेको “भट्टी” जान्छु भने त के विगारे ? त्यो पनि कार्यालय समय पछि । म त्यहाँ साथी भाई सँग भेटघाट छलफल गर्न मात्र गएको पनि हुन सक्छु स मदिरा सेवन गर्न कै लागि पनि गएको हुन सक्छुस त्यस क्रममा मैले मेरो पदिय मर्यादा र आचार संहितालाई उल्लघंन भने गर्न हुँदैन । त्यस प्रति म पूर्ण सचेत छु । जागिरे जिवनको ३५ वर्षमा कहि कतै झुक्नु परेको छैन । चिल्लो र चिप्लो कुरा गरेको छैन । चाकडी जान्दिन । देखेको कुरा प्रष्ट भन्छु ।कोही रिसाउँछ । तर गलत आश्वासन दिन्न । दिएको छैन ।
म मदिराजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने व्यक्तिलाई एउटा धुरन्धरर घघडान जंड्याहाको रुपमा चित्रण गरीएको छ । मेरो शुभ चिन्तक, नातागोता, छरछिमेकीमा नैरास्यता भरी दिएको छ । किन तिर्थले यसो बोल्यो भनेर ? म सँग भएको वार्तालाई तोड मोड गरी जसरी प्रस्तुत गरीएको छ त्यस उपर सम्बन्धित निकायले अवश्य अनुसन्धान र कार्वाही गर्ने नै छ ।
जहाँ सम्म म उक्त टेलिभिजन कार्यक्रमा सहभागी हुने वा नहुँने कुरा छ त्यो पनि निजले विचार गर्नु पर्ने विषय थियो । सूचना अधकारी भनेको कुनै विषयको विज्ञ होईन ऊ त केवल उपलब्ध सूचना सोरकारवालाई प्रचिलत नेपाल कानून अनुसार उपलब्ध गराउने एउटा एजेण्ट वा माध्यम हो । उसलाई विज्ञको रुपमा त्बपि क्जयध बोलाउनु नै उचित होईन । सूचन लिन सूचना अधिकारी समक्ष आउने हो ।सूचना दिन सूचना अधिकारी अमुक स्थानमा जान बाध्य हुँदैन ।
उनले मेरो Voice Record गर्नु पूर्व सूचना गरेको भए सायद वार्ता अर्कै खालको हुने थियो की ? पूर्व सूचना नदिई पनि कति पय स्टिङ्ग अपरेशनमा रेकर्ड गरिन्छ तर त्यस्तो परिस्थिति त होईन यो ? स्टिङ्ग अपरेशन पनि अन्य प्रकृयाबाट सूचना प्राप्त नहुँने भए पछि मात्र प्रयोग गरीने अन्तिम अस्त्र हो । त्यसमा पनि निश्चित Protocol हुन्छन् । यहाँ त सिधै दादागिरी गरीएको छ । कसैको निजी जिवनका वैयक्तिक कुरालाई गलत तरिकाले नकारात्मक छवि निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको छ । यो एक Cyber Crime पनि हो ।
तसर्थ, निज पत्रकार माथि पत्रकारले पालना गर्नु पर्ने न्यूनतम नैतिक आचरण र आचार संहिता समेत पालना नगरी कसैको मान मर्दन गरेकोमा प्रचलित नेपाल कानून अनुसार हदै सम्मको कार्वाही गर्न प्रेश काउन्सिल नेपाल सँग माग गर्दै उक्त समाचार र समाचारलाई आधार बनाई Facebookतथा Twitter मा Share गरीएका Status बाट मेरा शुभचिन्तक, आफन्तजन र अन्य महानुभावहरुमा पर्न गएको मानसिक चोट प्रति गम्भिर क्षमा याचना गर्दै जस्ले जसरी चित्रण गरे पनि म स्वाभिमान बन्धकी राख्न नसक्ने, एउटा ईमान्दार, खरो कर्मचारीको रुपमा सधै रहने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दछु ।
म मदिरा पिउँदिन तर भट्टी र मदिरा प्रेमीलाई घृणा पनि गर्दिन । मेरा अधिकांश साथीहरु मदिरा प्रेमी छन कसैले पनि मलाई नचिनी, नजानी मेरा सम्बन्धमा धाराणा निर्माण नगरी दिनु हुन समेत पुन अनुरोध गर्दछु ।